Iindaba-Ukuhlelwa kweCalcium Carbonate
Udidi lweCalcium Carbonate
ICalcium Carbonate inokwahlulwa ibe: calcium enzima iCarbonate, ukukhanya kwecalcium Carbonate, ikhalsiyam esebenzayo yeCarbonate, ityhefu yerhasi desulfurization calcium Carbonate, intle kakhulu calcium carbonate, njl.
Ubunzima beCalcium Carbonate
Ubume becalcium carbonate enzima abuhambelani, ubungakanani bayo bamasuntswana buyahluka kakhulu, kwaye amasuntswana anemiphetho ethile kunye neekona, umphezulu urhabaxa, ulwabiwo lobungakanani bamasuntswana lubanzi, kwaye ubukhulu bamasuntswana bukhulu. Ubungakanani be-particle ubukhulu ngokubanzi buyi-1-10μm. Ngokomgangatho wayo wokuqala wobungakanani be-particle (d), i-calcium carbonate enzima yahlulwe: i-calcium carbonate (> 3μm) yomhlaba, umhlaba we-calcium carbonate (1 ~ 3μm), i-ultrafine calcium carbonate (0.5 ~ 1μm calcium calcium carbonate) : a. Imilo yamasuntswana engaqhelekanga; b. Ukuhanjiswa kobungakanani beengqimba; c. Ubungakanani obukhulu beengqungquthela.
I-calcium Carbonate iye yasetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iphepha, iiplastiki, iifilimu zeplastiki, imicu yeekhemikhali, irabha, izinto zokubambelela, ukutywina, iikhemikhali zekhaya, izinto zokuthambisa, izinto zokwakha, iipeyinti, iipeyinti, ii-inks, i-putty, ukutywina i-wax, i-putty, ukuziva ukuvaleka, amayeza, ukutya (Ezifana nokuhlafuna itshungama, itshokholethi), ukutya, imisebenzi yayo zezi: ukwandisa umthamo weemveliso, ukunciphisa iindleko, ukuphucula ukusebenza kwenkqubo (njengokuhlengahlengisa i-viscosity, iipropathi ze-rheological, ukusebenza kwe-vulcanization), ukuphucula uzinzo, ukuqinisa okanye ukomeleza, ukuphucula ukuPrinta ukusebenza, ukuphucula iipropathi zomzimba (njengokumelana nobushushu, ukuxhathisa ukuxhathisa, ukuxhathisa i-abrasion, ukudodobala kwelangatye, ubumhlophe, ukuqaqamba), njl.
Isetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni iphepha, iiplastikhi, iifilimu zeplastiki, imicu yeekhemikhali, irabha, izinto zokuncamathelisa, izinto zokutywina, iikhemikhali zekhaya, izithambiso, izinto zokwakha, iipeyinti, i-inki, i-putty, ukutywina i-wax, i-putty, ukuziva ukupakisha, amayeza, ukutya (njengokuhlafuna gum), itshokholethi), ukutya, imisebenzi yayo zezi: ukwandisa umthamo weemveliso, ukunciphisa iindleko, ukuphucula ukusebenza kwenkqubo (njengokuhlengahlengisa i-viscosity, iipropathi zerheological, ukusebenza kwe-vulcanization), ukuphucula uzinzo lobungakanani, ukomeleza okanye ukuqinisa, kunye nokuphucula ukusebenza kwoshicilelo. Ukuphucula iipropathi zomzimba (ezinje ngokuxhathisa ubushushu, ukukala, ukuxhathisa kwe-abrasion, ukudodobala kwelangatye, ubumhlophe, ukuqaqamba), njl.
I-calcium esebenzayo iyasebenza
Izongezo zeCalcium. Ingakhuthaza ukubalwa komongo wethambo kunye namazinyo, igcine ukonwaba okuqhelekileyo kwemithambo kunye nezihlunu, kunye nokunciphisa ukugcwala kwe-capillary. Isetyenziselwa ukuthintela nokunyanga izifo ezinganyangekiyo ezibangelwa kukusilela kwe calcium.
I-Kaolin ineentlobo ngeentlobo zokusetyenziswa, ngakumbi ukwenza iphepha, iiseramiki kunye nezinto zokwenziwa, kwaye okwesibini ukutyabeka, ukugcwalisa iirabha, iiglasi ze-enamel kunye nezinto zokwenza izinto zesamente ezimhlophe.
I-Kaolin yiminerali engeyiyo yentsimbi, uhlobo lodongwe kunye nodongwe olulawulwa ziiminerali zodongwe. Ibizwa ngegama leGaoling Village, Idolophu yaseJingde, kwiPhondo laseJiangxi. I-kaolin emsulwa imhlophe, intle, ithambile kwaye ithambile, ineplastikhi elungileyo kunye nokumelana nomlilo. Ubume bayo bezimbiwa buqulathe ikakhulu i-kaolinite, halloysite, hydromica, illite, montmorillonite, quartz, feldspar kunye nezinye izimbiwa.
1. Ukusetyenziswa kwekaolin kwimveliso yeceramic: IKaolin yemveliso yeceramic luthotho lweemveliso eziveliswa ngezinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu kunye nobuchwephesha obuphambili kunye nezixhobo. Imveliso inobunyulu obuphezulu, iipropathi ezizinzileyo zeekhemikhali, kwaye inezinto ezintle ezizodwa zomsebenzi owenziwayo weentlobo ezifanayo zasekhaya. Iimveliso zeceramic ezivelisiweyo zimhlophe, zixinene, amandla oomatshini aphezulu, kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu.
2. Ukusetyenziswa kwekaolin kumzi mveliso werabha: I-Kaolin esetyenziswa kwishishini leerabha yenziwe ngezinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu kwaye icokisiwe kukuchaneka. Imveliso inobungakanani bamasuntswana amahle, ukufuma okuphantsi, i-PH ezinzileyo kunye ne-DPG adsorption, kwaye umthamo wayo wentlenge ungaphezulu kwesalathiso esichazwe liCandelo loMphathiswa Wezemveliso.
3. Ukusetyenziswa kwekaolin kwintambo nasekuqhubekisweni kwentambo: Izongezo ezisebenzayo zeKaolin zikwasetyenziswa ngokubanzi kwintambo nasekuqhubekisweni kwentambo, ngakumbi kwiintambo ze-EPDM.
Ukusetyenziswa kwekaolin kwimveliso yezolimo: i-kaolin ene-calcined inefuthe lokuthintela kwimitha ye-infrared enobude be-7-25μm. Xa kongezwa i-kaolin eguqulweyo, iqondo lobushushu ebusuku kwifilimu yezolimo linokunyuswa nge-2-3°C. Nciphisa umahluko wobushushu phakathi kwemini nobusuku, okulungele ukukhula kwezityalo.
5. Ukusetyenziswa kwekaolin kwimveliso yokutyabeka: i-kaolin ebunjiweyo yinto eyenziwe ngokukodwa nge-aluminium silicate extender pigment kunye nezongezo ezininzi. Inobumhlophe obuphezulu, umxholo wokungahlambuluki okuphantsi, inertness eyomeleleyo yamachiza, kulula ukusasaza kwiinkqubo zamanzi kunye neoyile, kwaye inokusetyenziswa ipeyinti esekwe emanzini, ipeyinti, i-putty kunye nesitywina, njl.
6. Ukusetyenziswa kwekaolin kumzi-mveliso we-inki: i-kaolin yenzela i-inki imveliso eveliswa ngezinto ezikrwada ezikumgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephambili kunye nezixhobo. Imveliso inokucoceka okuphezulu kunye neempawu ezizinzileyo zomzimba kunye neekhemikhali. Inokuthatha indawo yenxalenye yeetanium dioxide, inciphise iindleko zokuvelisa i-inki, kwaye iphucule ukugubungela i-inki. Amandla, ukuthinta amandla, ukuphucula i-inks adsorption, i-rheology, ukukhanya okukhanyayo, ukuthintela imvula, ngaloo ndlela kuphucula umgangatho weinki
7. Ukusetyenziswa kwekaolin kushishino lweglue: i-kaolin isetyenziswa kwimveliso yeglue, ecokisekileyo ngezinto ezisemgangathweni ezikrwada kunye nobuchwepheshe obuphambili kunye nezixhobo. Imveliso ineempawu ezizinzileyo zomzimba kunye neekhemikhali, i-viscosity ephezulu, ubumhlophe obuhle, ukumiswa okuhle kunye nokufudumala, kwaye akukho buhlungu. Yindlela efanelekileyo yokufaka iglu ngexabiso eliphantsi. Abavelisi basekhaya basebenzise i-kaolin powder ukufaka isitashi esibizayo.
8. Ukusetyenziswa kwekaolin kumzi-mveliso weplastikhi: imboni yeplastikhi isebenzisa iiplastikhi zobunjineli be-kaolin, iiplastikhi ezikhethekileyo, kunye ne-kaolin ekhethekileyo eguqulweyo yezincedisi zentambo. Itholakala ngokukhetha izinto eziphezulu eziphezulu kunye nezinto eziphezulu, usebenzisa iteknoloji ephezulu kunye nezixhobo, kwaye iguqulwe ngokubalwa kunye ne-arhente yokudibanisa.
9. Ukusetyenziswa kwe-kaolin kwimveliso ye-petrochemical: isetyenziswa njengesixhobo sokulungiswa kwe-petroleum. Ngenxa ye-catalyst elungiselelwe yi-kaolin, inomsebenzi ophakamileyo we-matrix, uxhathiso olomeleleyo kungcoliseko olunzima lwesinyithi, umsebenzi ongcono wokukhetha kunye nokukhetha.
10. I-Kaolin isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso wephepha. Zimbini iindawo eziphambili, enye kukugcwalisa okusetyenziswa kwinkqubo yokwenza iphepha, kwaye enye ngumbala osetyenziswa kwinkqubo yokutyabeka umphezulu.
11. Ukusetyenziswa kwekaolin kumashishini asahlumayo. I-Kaolin inobumhlophe obuphezulu kunye nokuqaqamba, ukuthamba, ukufunxwa kwamanzi okuqinileyo kwaye kulula ukubola nokumisa emanzini, iplastikhi elungileyo kunye nokubambelela okuphezulu, ukufakelwa kombane okugqwesileyo, ukunyibilika okuhle kweasidi, intengiso eyomeleleyo ye-adsorption kunye nokutshintshiselana ngokusebenza kwe-ion, ubungqingqwa obuhle kunye nokuphindaphinda okuphezulu.